देउवा सरकारको महंगीको अर्काे उपहार : गाडी भाडादर बढ्यो, कुन रुटमा कति ? « Deshko News
देउवा सरकारको महंगीको अर्काे उपहार : गाडी भाडादर बढ्यो, कुन रुटमा कति ?
काठमाडौं, चैत २०
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अन्तरप्रदेश चल्ने लामा दूरीका सार्वजनिक सवारीको भाडा १५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरिय निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुबहाक सवारीको भाडा १० प्रतिशतले बढाएको छ । यस्तै, पहाडमा मालबाहक सवारीका लागि १३ र तराईमा १५ प्रतिशतका दरले भाडा बढेको छ ।
लामो दूरीका सवारी भाडा बढेसँगै छोटो दुरीको सवारी भाडा समेत बढाउन व्यवसायीले लबिङ थालेका छन्।
डिजल–पेट्रोलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने क्रम चलिरहँदा यातायात व्यवसायीले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन वा भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
कुन रुटमा कति भाडादर ? हेर्नुहोस् सूची